I-Church eguqulwe - Ifulethi le-Triplex- Greater Mcr - I-Airbnb
I-Church eguqulwe - Ifulethi le-Triplex- Greater Mcr
21 okushiwo abanye
Hulme, England, i-United Kingdom
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Zainab
U-Zainab Ungumbungazi ovelele
Leli fulethi litholakala endaweni yokuguqulwa kweBandla elisohlwini lweBanga lesi-II, elithatha izitezi ezintathu.
Eduze kwenkaba yedolobha kodwa kude ngokwanele ukugwema ukuphithizela, leli fulethi elibanzi lingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezintathu, nombhede ongusayizi wenkosi owodwa nombhede owodwa otholakalayo.
Sicela uqaphele ukuthi ifulethi lizohlanzwa ngokomsebenzi ngaphambi nangemva kokuhlala, kube nezinqubo zokuhlanza ezithuthukisiwe ezikhona.
Kumahhala emgwaqeni wokupaka izimoto ngemva kuka-4pm phakathi nesonto, futhi mahhala yonke impelasonto.
Kuyisizinda esihle sokuhlola iManchester- emaphethelweni enkaba yedolobha, hhayi eduze kakhulu nomsindo nokuphithizela, kodwa kuseduze ngokwanele ukuba phakathi kwesenzo! Ifulethi litholakala ngohambo lwemoto lwemizuzu emi-5-7 (ungathatha kalula i-Uber) ukuya enkabeni yesikhungo seManchester City, isitobhi sebhasi singaphandle nje kwefulethi (uhambo lwesekhondi elingu-30), lapho uhambo lokuya ngendlela eyodwa (cishe i-10mins) izokuyisa enkabeni yedolobha enezindawo zokucima ukoma, izikhungo zezitolo, iminyuziyamu, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, nezindawo zokudlela ezitholakalayo.
Inkundla yebhola ye-Manchester United ikuhambo oluyimizuzu eyishumi uma uhamba nge-Uber.
Ukuhamba imizuzu emi-2 ukusuka efulethini kuzokuholela kumakhefi endawo, izitolo zegrosa, ngisho nendawo yokuzivocavoca!
Kuvikeleke ngokwedlulele- ukungena ngeminyango ephindwe kabili yesonto.
Itholakala esitezi esiphansi, esihlanganisa isiqhingi sasekhishini esine-hob eyakhelwe ngaphakathi kanye nendawo yokuhlala. Noma, thola ikhofi lakho ngenkathi uhlezi efasiteleni le-bay ubukele umhlaba udlula! Ikhishi liphelele ngezinto zokusika nezitsha, kanye nezisekelo zokupheka emakhabetheni ungazisiza nawe.
Izindawo zokusebenza zifaka isiqhingi sasekhishini, noma kunedeski eligoqekayo nesitulo ongasisebenzisa ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Itholakala esitezi esiphansi, sineshawa, indlu yangasese kanye nesitsha sokugezela. Izinto zokugeza namathawula kunikezwa isivakashi ngasinye.
Indawo yokuhlala -
Isitezi sokuqala sinegumbi lokuhlala elibanzi, eline-mezzanine evumela ukukhanya kwemvelo ukuthi kugcwale egumbini ngamafasitela okuqala esihlabathi.
Ifulethi line-fiber optic Broadband, eliphelele nge-projektha enkulu yokubuka i-Netflix/Sky uma ufisa.
Itholakala esitezi sokuqala, igumbi lokugezela eliphindwe kabili linebhavu, ishawa, indlu yangasese kanye ne-basin. Izinto zokugeza namathawula kunikezwa isivakashi ngasinye.
Igumbi lokulala eliyinhloko-
Ngophahleni lwangempela, igumbi lokulala elikhulu linombhede omkhulu olingana nenkosi, ogcwele amakhethini amnyama ukuze uqiniseke ukuthi awuphazamiseki ngenkathi ulele.
Igumbi lesibili -
Njengamanje elakhiwe njengegumbi lokugqoka, lingamukela kalula umbhede owodwa (womoya) uma kudingeka.
Ifulethi lingalala ngokunethezeka kufika kwabathathu.
-Uma ufuna ifulethi ukuze wenze iphathi, sicela uqaphele ngomusa, akunjalo!-
1 umbhede omkhulu, imibhede yomoya engu- 1
Bonisa wonke amasevisi angu- 42
ubusuku obungu-7 e- Hulme
Jun 28, 2022 - Jul 5, 2022
4.81 out of 5 stars from 21 reviews
4.81 · 21 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-21
Ngihlala eduze futhi ngitholakala ngocingo/ngombhalo ngaso sonke isikhathi
UZainab Ungumbungazi ovelele
Izinga lokuphendula: 91%
Hlola ezinye izinketho ezise- Hulme namaphethelo